Nin Qorsheeyay in Uu Naagtiisa Dillo, Laakiin Aay ka Badbaaday, | Biyoguurenews.com
Home Faallooyin Nin Qorsheeyay in Uu Naagtiisa Dillo, Laakiin Aay ka Badbaaday,
Nin Qorsheeyay in Uu Naagtiisa Dillo, Laakiin Aay ka Badbaaday,
Markii ay Nancy Shore gaari kaga soo laabatay kaniisadda oo gurigeeda ay u soo socotay habeen ka mid ahaa bishii Agoosto 2012, ayaa waxaa jidka u taagnaa ninkii toogan lahaa oo qori ku hubaysnaa. Way badbaadday, laakinse ayadoo jiifta sariirta isbitaalka ayey boolisku ku wargeliyeen cidda lagu eedeynayo inay ka dambaysay dilkeeda.
“Waxaan soo marnay guur wanaagsan” ayey tiri Nancy Shore oo 57 jir ah.
“Sida muuqata guulo iyo caqabado ayaa kula soo gudboonaanaya. Waxaan ula jeedaa, ma aynaan ahayn dad dhamaystiran. Arrimo ayaa mararka qaar na dhex mari jiray, waana ka gudbi jirnay”‘
“Wuxuu ahaa nin naxariis badan, akhyaar ah, oo i jecel. Carruurteenna aad ayuu ugu xiraa” ayey tiri.
Waxay sheegtay in markii carruurtoodu ay koreen in odageeda, Frank, ay aad u bateen safarradiisa uu ugu baxo shaqadiisa oo ahayd xisaabiye. Nancy waxay dareentay kali ahaansho.
Frank wuxuu ku maqnaa wax ay Nancy u haysatay safar shaqo habeennimadii 18ka Agoosto 2012. Waxay ka qayb gashay isu imaatinka kaniisadda, ka dibna waxay soo martay meel ay adeeg ka rabtay, guriga ayeyna ku laabatay.
“Markii aan imid geerashka aan gaariga ku xareeyo, ayaan durbaba waxaan arkay nin qori ku hubaysay oo ceego igu haya, qorigana madaxa iga saaray” ayey tiri Nancy. Wuxuu weydiiyey inay dhiibto shanddadeeda.
“Markii 3aad ayuu si hanjabaad leh ii weydiiyey in aan shanddadda dhiibo” ayey tiri. “Waan ku wareejiyey, oohin ayaanan la dhacay, ka dibna si degdeg ah ayuu madaxa iiga toogtay, waana dhacay” ayey tiri.
Nancy miyirka ayaa ka tegey, ninkiina shanddaddii yuu la cararay, laakin gaariga ma uusan qaadan. Xabbadda waxay dhex martay madaxa, waxayna dhex fariisatay sambabka midig.
Markii ay soo naaxday ayey u soo gurguuratay dhinaca gaariga, waxayna riixday badhan loogu tala galay.
Badhanka markii uu shaqayn waayey ayey intii tamarteeda ah isugu geysay sidii ay guriga gudihiisa ku geli lahayd. Muraayadda ayey isku fiirisay markii ugu horreysay.
“Waan is fiiriyey, mise dhiig baa ishayda ka socda oo ilaa shaarkayga gaaray” ayey tiri Nancy.
“Weli markaas ma aanan rumaysan in aan wayey ishayda bidix”
Ayadoo neefsigu uu dhib ku yahay ayey gurmad caafimaad u yeeratay, ayadoo ku qaylinaysay “I caawiya!, I caawiya!”, ka dibna waxay tilmaantay ninka weeraray. Ka dib, si mucjiso ah ayey ku gaartay irridda hore halkaasoo ay ku sugtay gurmadka.
Mid ka mid ah booliskii meesha yimid ayaa la xiriiray Nancy carruurteeda, kuwaasoo iyaguna telefoon u diray aabahood, Frank.
Franks degdeg ayuu u soo laabtay, wuxuuna toos u abaaray isbitaalkii ay xaaskiisa taallay, ayadoo ay murugo ka muuqato.
Sidaasoo ay tahay, markii ay boolisku bilaabeen baaritaanka ayaa waxay durbaba heleen xog naxdin leh oo ay ka heleen telefoonka gacanta e Frank, waxaana ku jiray sawirro iyo farriin-qoraaleedyo ay haweeney kale u soo dirtay.
Frank wuxuu la joogay haweeneydaas wakhtiga xaaskiisa la weerarayey, kumana maqnayn safar shaqo.
Wuxuu xiriir ka dhexeeyey muddo seddex sano ah.
Markii ay Nancy soo yara bogsootay oo ay ka soo baxday qaybta dadka xaaladoodu aadka u liidato ee loo yaqaanno ICU, ayaa waxaa telefoon u soo diray Frank oo qirtay inuu gogol dhaaf sameeyey.
“Illin ayaa i soo dhaafatay” ayey tiri, “laakinse isaga ayaa iga darnaa oo si ba’an u oynayey, ilaa aan fahmi waayey waxa uu sheegayo”.
Xilligaa ka dib, dhowr goor oo kale ayuu Frank isbitaalka ku soo booqday Nancy, laakin akhbaar tii hore ka sii daran ayaa soo baxday.
Intii ay qalliinka ka soo kabanaysay Nancy, baaritaannadana lagu samaynayey, boolisku waxay u sheegeen inay xireen nin lala xiriirinayo weerarka – waa John Franklin Howard – Sayga Nancy oo qof walba uu u yaqaanno Frank.
“Waan niyad jabay. Waxaan xusuustaa in aan aad u ooyey ayadoo xataa ishayda qalliin lagu sameeyey ilaa ay hooyadey ii timid oo ay igu tiri ‘jooji oohinta, ishaada way soo bogsanaysaa, madaxaagana sidan ha u foorarin'”.
Dambiilayaasha ayaa si dhiigmiirad ah ula dhaqmayey Frank, waxayna si is daba joog ah u weydiinayeen lacag dheeraad ah.
Wuxuu boqolaal kun oo dollar ku bixinayey gabadha uu saaxibka la ahaa. Sidaa darteed, Frank wuxuu bilaabay inuu si xun u maamulo lacag uu lahaa mid ka mid ah dadka macaamiishiisa ah – oo qiyaastii ilaa 30 milyan oo dollar ah.
Nancy ma oga sababta uu Frank u doonayo in loo dilo ayada. Laakin waxay rumaysan tahay in sababtu ay tahay maadaama uu ogyahay inaysan marnaba yeeli doonin inay is furaan.
“Ilaah ayaan hore ugu ballan galay in aanan furi doonin” ayey tiri Nancy. “Sidaa darteed, wuxuu bilaabay inuu xiriir la yeesho haweeney kale. Arrinta kale ee ku soo xigtay waa inuu lacag islaameed ku ciyaaro, sababtoo ah wuxuu doonayey inuu haweeneydaas tuso inuu yahay nin taajir ah. Waxayna ila tahay in markii dambe uu is madax maray oo uu is tusay in aniga la iga takhalluso”.
Dacwadda Frank, xeerbeegtida waxay ku qaadatay laba saacadood oo kaliya inay ku go’aamiyaan inuu dambiile yahay. Waxaa lagu xukumay xabsi daa’in ay tahay inuu marka hore 30 sano oo xabsi ah soo dhamaysto, ka hor inta aan la tixgelin inuu racfaan qaato. Wakhtigaas da’diisu waxay noqonaysaa 85 jir.
Xaqiiqadii, Nancy way is fureen dacwadda oo socota, laakin haddii waxba lagu weyn lahaa, waxay sheegtay in doonaysay in xiriirkooda ay dib u dhisaan.
“Sababtu waxay tahay waan jeclaa markaas, welina waan jeclahay. Ma aha jacaylka maxabbada leh, laakin waa inuu yahay carruurtayda aabahood, mar walbana jacaylkaas wuu jiri doonaa” ayey tiri Nancy.
Carruurta waxay aaminsanaayeen in aabahood si khalad ah uu xukun ugu dhacay.
Xukunka ka dib, Nancy iyo carruurta gooni gooni ayey uga baxeen maxkamadda. Bil ayey ku qaadatay inay xiriir yeeshaan.
Waxaasoo mushaakil ah oo dhex maray, misna nancy waxay awood u yeelatay inay saygeeda saamaxdo – waxayna cafis u marisay qoraalka laga saxiixo qofka dhibbanaha ah. Sababta ayey ku tilmaantay in diinteeda masiixiga ay sidaa farayso.
Nancy dib dambe uma arag umana maqal Frank tan iyo markii uu xabsiga galay. Inkastoo ay damacsan tahay in ay soo booqato, haddana ma doonayso in ay sidii hore isku sii ahaadaan.
Dib u kabashada Nancy waxaa aad ugu riyaaqay dhakhaatiirta. Dhowr qalliin oo dib loogu hagaajinayo wajiga iyo daloolka isha ayaa lagu sameeyey, waxaana hadda ugu jira il macmal ah. Waxay kaloo haysataa shaqo wakhti buuxa ah oo ay caawiye ka tahay hay’ad shuruucda ka shaqaysa.
“Weli xabbad ayaa sambabkayga fadhida, laakinse isticmaalka gacantayda midig oo aan waayey ayaa hadda ii soo noqotay, waxna waan ku teeb garayn karaa” ayey tiri.
Waxay sheegtay in lix sano ka dib markii dhibaatadu ay qabsatay iyo maanta uu nolosheeda farqi weyn u dhaxeeyo, oo ay hore uga tallaabsatay.
Previous articleBerbera, Labo Kambani oo Reer Yurub ah oo Dekada Berbera ka samaynaya Goob maraakiibta Lagu dayacti iyo Maareeyaha Dekadaha Somaliland oo Soo Dhaweeyay
Next articleDAAWO:-“Shirkii Garxajis Waxa Labadda Beelood Looga Mamnuucay Amaankooda Ayaanu U Baqanay….Xildhibaan Wali Xaawi